Ibsaa Jireenyaa - Page 2 of 76 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
June 24, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti Islaama qabachuu keessatti dhiibbaa maatiin namarraan gahu ilaalle jirra. Amma seenaa warra dhiibbaa maatii danda’anii ilaalla. Tarii kanaaf fakkeenyi ifaa seenaa Nabiyyi Rabbii Ibraahimi. Ibraahim (aleyh salaam) yommuu da`awaa babal’isuu fi qabachuu irraa isa dhoowwuuf dhiibbaan abbaa fi ummata isaa irraa ni qunname. Garuu inni dhiibbaa kanaaf gadi jechuu ni dide. Amantii isaatiif jedhee nafsee fi qabeenya isaatiin wareega kafalun karaa isaa itti fufe. Kanaafi, Rabbiin akkana jechuun isa faarse:
June 23, 2021 Sammubani Leave a comment
19-Dhiibbaa Haadha Manaa
June 13, 2021 Sammubani Leave a comment
Yeroo ammaati fi durii wantoota Islaama irraa duubatti akka deebi’an ykn Islaama keessa taa’uun wanta isa faallessu akka hojjatan nama taasisu keessaa tokkoo qabeenya jaallachuu fi hiyyummaa sodaachudha. Gufuun guddaan yeroo ammaa Muslimoota Itiyoophiyaa muudataa jiru keessaa tokko dhaabbata jabaa ‘Majliisa gaarii’ dhabuudha. Majliisni jabaa akka hin taane namoonni gufachiisan warra qabeenya jaallatuu fi hiyyummaa sodaatudha. Kanarraa kan ka’e, qabeenya ummata ni saamu, inumaa wanti kana caalu amanti (aqiida) ummataa booressuuf ahbashiin alaa fidatu. Kuni hundi qabeenya jaallachuu fi hiyyummaa sodaachudha. Mee sababa 18ffaa Islaama akka hin qabanne nama taasisu haa ilaallu.
June 9, 2021 Sammubani Leave a comment
Ajaa’iba namni gariin saalfachuun milkaa’inna irraa duubatti deebi’a. Islaama waan hordofuuf nama keessa isaatti qaaniin itti dhagahamutu jira. Inumaa, wanti kanarra badaan namoota saalfachuun Islaama qabachuu dhiisudha. Islaama qabachuu kootiif maaliif namoota saalfadhaa? Isaan eenyu ta’aniitin isaan saalfadhaa? Saalfannaan wanta badaa irraayyi malee karaa milkaa’innaa keessa deemu saalfachuun wanta hin jirreedha. Shamarri hijaaba uffattu saalfachu hin qabdu, dargaggeessi areeda dheeressuu fi surree gabaabsu saalfachu hin qabu. Kana irra, hijaabni kabajaa ishii akka ta’ee sirritti beeku qabdi. Sababoota Islaama akka hin qabanne nama taasisan keessaa tokko namoota saalfachuudha.
June 6, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe irraa itti fufuun waa’ee salaata halkanii ilaalla. Salaanni halkani salaata Ishaa’in booda salaatamuudha. Keessumayyu erga rafanii booda halkan qixxee ykn gara dhuma halkanii (sa’aati 9tti) ka’uun salaatama. Salaanni halkanii sadarkaa fi faayda guddaa akka qabu barruulee “Gabroota Ar-Rahmaan” jedhu jalatti ilaalle jirra. Har’as itti fufuun wanta xiqqoo itti daballa.
Sababootaa fi Furmaata Waliin Oduu Warra Duubatti Deebi’anii-Kutaa 15
June 3, 2021 Sammubani One comment
Kutaa darbe irraa itti fufuun sababoota duubatti deebi’iinsaa ni ilaalla:
May 29, 2021 Sammubani 2 comments
Balaan Of-Dinqisiifachuu inni guddaa ta’e abbichi Islaama irraa duubatti deebi’uu fi kufrii irratti du’uudha. Kanaaf, seenaan armaan ragaa ta’a. Seenaa kana dubbisnee balaa of-dinqisiifachu sirritti haa hubannu.